Ny aretina Coronavirus 2019 (Covid-19) dia virus vaovao iray izay hita fa antony nahatonga ny fihanaky ny aretin'ny taovam-pisefoana, anisan'izany ny pnemonia mety hahafaty. Nanomboka tany Wuhan, Sina ny aretina tamin'ny Janoary 2020, ary nanjary krizy pandemika sy manerantany. Ny v ...
Top 10 Global Top: Orinasa miloko sy palitao ambony
Laharana isan-taona an'ny orinasa Top Paint and Coatings Ny Global Top 10 manaraka dia laharana voalohany amin'ireo mpanamboatra coatings 10 manerantany amin'ny taona 2019. Ny laharana dia miorina amin'ny varotra coatings 2019. Ny fivarotana vokatra hafa tsy mifono dia tsy tafiditra ao. 1. Varotra PPG Coatings (Net): $ 15.1 miliara 2. Ny Sher ...
Vokatra NOELSON izay ampiasaina amin'ny fanoherana ny harafesiana.
Inona ireo pigment manohitra ny lozisialy? Ara-dalàna sy miharihary ny harafesina amin'ny vy. Isan-taona dia mitentina mihoatra ny $ 100 miliara ny fanoloana vy eran'izao tontolo izao. Ny pigment izay mampihena ny vidin'ny harafesina dia pigment anti-corrosive. Vokatra NOELSON izay ampiasaina amin'ny fanoherana ny harafesiana. Nanomboka ny taona 1996, NOELSON ...